Nahita Teheran Tany Caracas Aho · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2015 6:50 GMT
Akanjo miboridana fitondra milomano (Bikinis) vs saron-doha mirebareba (Chadors ) any Venezoela sy any Iran: “Rehefa zatra tany Venezoela, na ireo vehivavy Iraniana fatra-panaraka ny nentim-paharazana aza dia niakanjo tahaka ireo rahavaviny Venezoeliana.” Sary teny an-dalamben'i Shiraz, avy amin'ny Flickr-n'i Gabriel White (CC BY-SA 2.0). Sary namboarin'i Georgia Popplewell.
Manontany tena ahohoe hatraiza no fantatry ny ankamaroan'ny Venezoeliana momba an'i Iran rehefa nifanaraka ara-politika ny filoha Chavéz sy Ahmadinejad, ary nanomboka nivezivezy mampitohy an'i Caracas sy Teheran ireo mpiasa Venezoeliana sy Iraniana.
Tonga tao an-tsaiko avy hatrany tamin'ny alàlan'ny sarintanin'izao tontolo izao izay tian'ny reniko ny nilalao azy niaraka taminay fony aho mbola ankizy i Iran. Sarintany— ilay karazany mahazatra nataon'i Mercator, namboarina mba ahitana indray mijery ny sarin'izao tontolo izao nananantsika tamin'izany fotoana zany — ary saika naharakotra ny antsasaky ny rindrin'ny efitra fandrian'ny anadahiko, ao mampiseho firenena iray antsoina hoe Iran, amin'ny teny hoe “Persia” ao anaty fonon-teny eo ambaniny eo. Ho ahy, tamin'ny faha-8 taonako, Persia dia toerana iray nitrangan'ny iray tamin'ireo lalao tena nankafiziko, ny Prince of Persia (Printsin'i Persia).
Rehefa nandroso ny taona, nifanojo taminà ohatra Persiana maro aho tamin'ny boky kely matematikako, sy Persiana Poeta tao amin'ny fitehirizam-bokin'ny Ray aman-dreniko. Ary amin'ireo sarimihetsika notontosaina tany amin'izany tany “lavitra” izany. Sarimihetsika tany Hollywood mazava ho azy. Iray amin'ireny ilay tantara mampihorohoro : vehivavy Amerikana nanambady Iraniana izay potika ny tontolony rehefa nitsidika ny tany fiavian'ny vadiny ry zareo ka nahatsapa ilay vehivavy fa tratry fandriky ny hadisoam-panantenan'ny vadiny sy ny fangejàn'ireo fomba amam-panao Iraniana. Tsy araka ny zavatra nandrasana anefa fa afaka nandositra niaraka tamin'ny zanany vavy izy, ary fantany fa tonga any aminy ihany nony farany rehefa hitany ilay sainam-pirenena Amerikana tsara tranainy.
Sary fototra iray hafa amin'izay efa fantatro izany. Ho ahy dia tao anatin'ny Afovoany Atsinana i Iran ary Arabo no fiheveranay azy, sary azo avy amin'ireo tantara The Arabian Nights. Tsy diso amin'io farany io aho satria hitako izany taty aoriana rehefa tonga tsy nampoizina tany Caracas i Iran sy Persia.
Niasa tao amin'ny Ministeran'ny toekarem-bahoaka aho tamin'ny 2007, minisitera izay nitantana ny vola izay holasahazon-damosin'ny fitantanan'i Chávez tamin'ny fotoan'andro : fanohanana ara-bola ireo kaoperativa sy ny fanofanana ireo vondrom-piarahamonina voahilika hanana fisainana mpandraharaha, sy ny sisa. Ny ankamaroan'ny asako dia ny manonta sy mandika teny amin'ireo taratasy izay avy any amin'ny mpitantana mankany amin'ireo mpiasa ambiny ao amin'ny ministera. Tsy maintsy nanitsy ihany koa ireo boky kely sy fomba fanehoan-javatra ary ny famadihana ho soratra ireo totalinà maribola be izay sarotra vakiana amin'ny endrika tarehimarika.
Isan'ireo antontan-taratasy tonga eo amin'ny latabatro ny taratasy, ny fanasàna, ary nanintona ahy ny iray tamin'ireny : taratasy manoro ireo toerana fianarana teny Persiana natao ho an'ny teknisiana sy lehibenà departemanta. Toa tetikady sarotra sy hafahafa izany kanefa dia nangataka ny hianatra aho.
Iraniana manam-pahaizana amin'ny fandikana teny sy literatiora Espaniola no nampianatra. Tanora eo ho eo amin'ny 20 taona eo ry zareo, ary vao voalohany niala an'i Iran ny sasany amin'izy ireo. Ho ahy dia vavahady misokatra ho aminà tontolo iray mahaliana ilay fianarana, tsy ho an'ny fitenenana sy ny fitsipi-pitenenana fotsiny, fa ho an'ny fiaraha-miasan'ny isam-batan'olona ihany koa. Lany tamin'ny fanontaniana momba an'i Iran ny androatokon'ny fianarana : ” Nahoana ny vehivavy no tsy maintsy misaron-doha ?”, “Maninona no tsy manao ny sasany ?”, ” Nahoana no manambady vehivavy maro ny lehilahy iray ?”, ” Amin'ny fivavahanay dia misy an'Andriamanitra na aiza na aiza. Nahoana ianareo no tsy maintsy mitodika any La Mecque rehefa mivavaka ?” Lasa fianarana momba an'i Iran ilay niandoha tamin'ny fianarana tenim-pirenena.
Nandroso tsikelikely tamin'ny fianarako ny fiteny aho, ary nanjary nankafy ny mahakasika ny Iraniana rehetra. Nanjary namana tsy foy ireo mpampianatra teny, ary namana manokana ny iray, izay nampahafantatra ahy ny mozika klasika Persiana, saimihetsika, tononkalo ary ny tantara amin'izao fotoana izao. Namaky sy nihaino ireo karazanà tantara tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny 1979 sy ny fiainana any Iran amin'izao fotoana izao aho. Nahita lisitra teny Arabo sy teny Espaniola lavabe avy amin'ny teny Persiana aho. Teo no nahafantarako fa nisy fifamatorana mafy amin'ireo angano nentim-paharazana Persiana ireo tantaran'ny Arabian Nights, ao anatin'izany ireo angano izay mampifandray azy rehetra.
Traikefa manokana ny fahitana ny fihetsik'ireo namana vaovao aty Caracas, ny fitsangatsanganana miaraka amin-dry zareo any amin'ny faritra onenany sy falehany dia toy ny any Teheran kely aty Caracas. Mahatsiaro sambatra ireo vehivavy tsy voatery mitondra voaly, ary faly mividy ireo karazanà akanjo izay sarotra tadiavina any an-tanindrazana. Nanomboka andrana goavana aho dia ny fanalàna volo amin'ny savoka, amin'ny fomba Iraniana, ny fomba fibangon-dry zareo volo sy ny fanamboarany tarehy. Nifanakalozanay ny gadona Persiana sy ny gadona Amerika Latina.
Fifangaroanà matihanina amin'ny resaka teny, teknisiana, injeniera ary mpiasanà masoivoho ireo olona nifanena tamiko tamin'iny fifanakalozana iny. Ny sasany niaraka tamin'ny fianakaviany, ny hafa kosa navelany ny fianakaviany sy izay tiany.
Hita taratra amin'ny fotoam-pankalazana nentim-paharazana ny firehana ara-politikan'ny Iraniana. Ireo mpanohana ny fitondrana, ohatra, dia mankalaza ny Nowruz- taom-baovao Persiana- any amin'ny masoivoho miaraka amin'ny fivavahana sy ny sakafo fanao amin'izany. Ny mpanohitra kosa dia mankalaza izany amin'ny fandihizana any an-trano na any amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana Iraniana ankafizin-dry zareo aty Caracas.
Eo amin'ny resaka fahalalahan'ny fanehoan-kevitra dia nanaitra ahy ny fombafijerin'ny namana Iraniana iray momba ny gazety iray izay niasako rehefa niala tamin'ny Minisitera aho, gazetim-panoherana matanjaka iray natao hitsikerana ny hetsiky ny governemanta sy hanaovna fanamby amin'i Chávez amin'ny fomba rehetra azo atao (ao anatin'ny olana lalina tanteraka izao io gazety io noho ny antsojay ataon'ny governemanta sy ny tsy fahampian'ny vola). Tamin'ny namangiany ahy tany amin'ny birao dia talanjona izy nandinika ilay pejy voalohany nipetaka tao an-dàlantsara no sady ningonongonona : ” tsy azo atao izao any Iran !”.
Fa ambonin'izany rehetra izany, nafana ny resakay momba an'i Iran, Ahmadinejad, Chávez ary Venezuela. Ny sasany nankasitraka an'i Chávez ary tsy tia an'i Ahmadinejad. Ny sasany tsy tia azy roa. Ny sasany tamin'ireo dia nahafantatra ny lazan'ireo filoha roa ireo eny anivon'ny vahoaka, ary ny sasany kosa tsy liana amin'izany ary nivoaka naka rivotra. Nahafahako nanao topi-maso ny tsy fitoviana amin'ireo karazana saranga sy fomba fivavahana ireny adihevitra ireny, fijery ifotony izay vaoaminka nihalalina niaraka tamin'ny nahatongavan'ireo Iraniana mpandika teny izay manam-pahaizana avy amin'ny oniversitem-panjakana, na avy any amin'ny faritra hafa ivelan'ny renivohitra Iraniana.
Saranga afovony na olona manan-katao ny ankamaroana'ireo namako ; nisokatra kokoa tamin'ny fomba tandrefana ry zareo ary soary mitsikera kokoa ny governemanta sy ny fisainana hanao Repoblika Islamika. Amiko, tsy hitako loatra izay mampiavaka azy ireo amin'ny tanora Venezoeliana mahazo tombony manokana ao amin'ny saranga antenatenany sy ny manan-katao, saingy matotra kokoa ry zareo noho izy ireo tsy mba nahazo izay rehetra nilainy.
Mpanaraka ny nenti-paharazana kokoa ireo vao tonga. Ny iray tamin'ireo vehivavy aza moa nahavita nifampizara trano taminà namana Iraniana izay lasa olon-tiako taty aoriana. Nanana fihetsika hafa tena tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny namako misaron-doha io vehivavy io, ary niangavy ilay olon-tiako mba hijanona ao an'efitranony mandra-pibangony ny volony, zavatra iray tena tsy sarotra tamin'ilay olon-tiako ny nanakatra izay heviny. Nanontany tena aho raha toa ka ny fitsidihako an'ilay tovolahy no tsy tiany, sy ny fijanonako ao mandritra ny alina, raha toa ka izay no izy dia tsy ho naborany mihitsy.
Sarotra ny tsy hisaina ny hatairan'ireo Iraniana mpandala ny nentim-paharazana sy ny mpitarika fivavahana, toy ireo niasa tao amin'ny masoivoho tamin'ny fahatongavany voalohany teto Caracas. Mampidera takelaby ngeza be ireo trano avon'ny tanàna any Venezoela, ahitàna vehivavy manao akanjo manaitaitra fitondra milomano, mitàna labiera, ary ny vavany misokatra manintona. Mivoaka ny fiara fitaterana ny feon'ireo gadona reggaeton sy salsa manaitra filàna, mandihy ao anatin'ny haizina mifampikasokasoka ny olona any amin'ny trano fandihizana. Tena ilain'ny olo-malazan'ny fahitalavitra matetika ny mitafy tapaka.
Fantatro, mazava loatra, fa fantatra tsara any Iran ny hetsika tahaka izao. Misy ny reggaeton Persiana ary hita any amin'ny faritra sasany any amin'ny fiaraha-monina ao Iran ny fety misary adala. Fa ny ankamaroan'ireo zavatra lazaiko eo ambony ireo dia sarotra ny manatanteraka azy malalaka any Iran. Tsaroako nahita andianà mpiasa ao amin'ny masoivoho Iraniana nisakafo aho nisakafo tao aminà trano fisakafoana Persiana iray malaza, niondrika tao amin'ny latabatra, hIta ho sadaikatra nanatrika ny fifaninanana fakàna tàhaka an'i Shakira, izay nivadika ho dihy manaitra filàna teo amin'ny fahitalavitr'ilay toerana fisakafoanana.
Lazain'ireo namako Iraniana lahy fa sarotra ho azy ireo ny tsy hanopy maso tany amin'ireo vehivavy Venezoeliana tamin'ny voalohany, fa nalaky zatra ny tontolo tsotra ry zareo, na dia miasa ora maro ambany masoandro amin'ireo tetikasa any ambanivohitra aza ry zareo, manao asan'ny mpandika teny ho an'ireo teknisiana Iraniana izay mila azy ireo mandrakariva, matetika tsy misy takalony amin'ireo ora maro ambony ampanga. Na eo ihany koa aza ny haratsin'ny trano izay tsy maintsy iaretan-dry zareo sy ny fomba fisafidianana hafahafa izay tsy nilazana tamin-dry zareo ny daty marina na ny fepetra momba ny fialàny tany Iran. Maro ireo vehivavy Iraniana no nanaraka ny fitafin'ireo namany Venezoeliana rehefa zatra ny fiainana tany Venezoela.
Tsy vitsy ireo fifandraisana arak'asa amin'ireo Iraniana no nivadika ho resa-pitiavana, tahaka izao mahazo ahy izao, na tonga hatrany amin'ny fanambadiana aza. Tsy voasakan'ny fefin'ny fiteny ny fitiavana. Tao amin'ny toeram-panorenana orinasa tany amin'ny fanjakan'i Guarico izay nandikan'ilay olon-tiako teny dia heno fa nisy ireo teknisiana Iraniana tsy hita niaraka tamin'ireo vehivavy mpiara-miasa nandritra ny andro fiasana. Ny fiara be izay mitatitra ireo mpiasa hiasa sy hody dia feno mpifankatia izay zarza raha afaka mifampiresaka, ary dia matetika antsoin'ireo mpiray firenena aminy ireo lehilahy mpandika teny mba handika ny fitoriany fitiavany amin'ireo Venezoeliana vavy tiany.
Tsy ilaozan'olana ny fifandraisan'i Venezoela amin'i Iran. Atahoran'ireo lehiben'ny mpanohitra fa ho tonga mpilalao mavitrika amin'ny politikan'ny Afovoany Atsinanana ilay firenena. Nolazain'i Chávez tamin'ny 2009 fa hanampy an'i Venezoela amin'ny fitrandrahana Oranioma i Iran ary nolazain'ireo mpanadihady politika ety anaty aterineto sy ny hafa nilaza fitsofohana faoben’ ireo mpiadin'ny Hezbolla ho tonga ao amin'ny firenena.
Mandritra izany fotoana izany, dia misy kazarana fifanakalozana hafa nohazo toeran teo amin'izy roa ireo : misy làlana nomena ny anaran'i Chávez sy Bolivar any Iran ; ary nanatontosa lahatsarin-kira manasongadina ny tanànan'i Teheran ireo mpanakanto Venezoeliana. Misy fahitalavitra vaovao amin'ny aterineto atolotry ny governemanta iraniana ho an'ny vahoaka any Amerika Latina, raha toa ka misy fianarana mahandro sakafo Iraniana kosa ao Venezoalà ary miroborobo ny fianarana fiteny Persiana, zavatra izay tsy azo natao folo taona lasa izay.
Fifanakalozana ara-kolotsaina ? Fanentanana ? sa samy misy kely fotsiny amin'izy roa ? Sarotra ny tsy hitebiteby momba ny zotra mety horaisin'ny fifanarahana sasantsasany, fa izay mahatalanjona ahy dia ny fihaonana ara-kolontsaina sy fihaonan'ny tsirairay ivelan'ny tontolon'ny fiarahana amin'ny governemanta. Sary tsy feno no omen'ny fanaovana tsinontsinona azy ireny.
Mitohy ny fifanarahana ara-politika. Tsy fantatra hoe mbola haharitra hafiriana izany na eo aza ny fanambarana mivaivay nataon'ireo mpitarika izay milaza fa haharitra ela izany. Tahaka ireo raharaham-pitiavana hitako niroborobo tao amin'ilay orinasa tany amin'ny fanjakan'i Guárico, mety hiredareda ny fifandraisana eo amin'i Venezoela sy Iran amin'izao fotoana izao, saingy mety hikorontana sy tsy ho azo antoka ihany koa izany. Inona no hitranga amin'ny fifandraisana raha toa ka midina hatrany ny vidin'ny solika , ary mitohy mitontongana hatrany ny ara-tsosialy sy ny ara-toekaren'i Venezoela ?
Saingy fantatro fa misy tetezana marobe tsy hita maso naorina ho amin'ny tsara any ambadik'ireny tahotra ireny. Nanambady Venezoeliana ny Iraniana vavy namako rehetra, ary azo antoka fa hanangana taranaka vaovao Perso-Venezoeliana izay vitsy no nisaina fa hisy izany zavatra izany folo taona lasa izay. Misy andianà Iraniana manokana mbola mamantatra an'i Amerika Latina amin'ny fomba hafa. Mety tsy naharitra ny fiainam-pitiavako, saingy tsy azo ravaina ny zavatra naoriko niaraka tamin'ny kolontsaina Iraniana.
Mbola miherika aho rehefa mandre olona miteny Persiana, mbola miezaka mitadidy ireo tononkalo amin'izany fiteny izany, ary raha toa ka misy fisalasalàna kely dia tadiaviko ao amin'ny Hafiz’s ghazals ny valiny. Ny resaka momba an'i Iran no nofidiako ho asa fanohanana tamin'ny fianarako, ary nandraiky narary aho rehefa voasambotra tamin'ilay hetsi-panoherana sy famoretana izay nitranga taorian'ny fifidianana tamin'ny 2009 tany Iran ireo olona mamiko, indindra rehefa nogadraina sy voaratra ara-batana sy ara-tsaina tany am-ponja ny iray tamin'izy ireo. Manontany tena aho, raha toa ka mbola salama saina sy tsara fanahy araka izay nahafantarako azy tany Venezoela izy taorian'ny zavatra niainany.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'ny olona no ifanakalozana ara-kolotoraly. Nisokatra ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, ho amin'ny fahatsorana na misy fahasarotana, ny tontolo kolotoraly. Ny fifampitankosenana no fifanakalozana ara-kolotoraly. Ho fanadinoina ireny tsiahy ireny dia tsaroako ny tenin'ilay namako tsy foiko, Venezoeliana mpanoratra sady mafana fo hatry ny ela, izay tahaka ahy nanjary nitia tanteraka ny momba an'i Iran tamin'ny alàlan'ny vahoakany. Nanambady vehivavy Iraniana mafana fo taloha sy taorian'ny andron'i Khomeini izy indray mandeha. Niteny tamiko izy indray mandeha : “Rehefa misy Iraniana manapaka ny làlanao, tsy vitanao ny tsy tara aminy. “
Taona maro aty aoriana, na efa mipetraka aty Frantsa aza aho, mbola reko manako foana ny teniny. Na inona na inona zava-nisy sy ho avy any Iran sy Venezoela, ny zavatra haharitra dia ny kolontsaina vaovao najoron'ireo olona niainga tamin'ny filàn'ny olona hisokatra amin'ireo tontolo vaovao. Ny fihaonako tamin'i Iran no porofo fa tontolo iray tsy voafehy ny kolontsaina raha ny marina, sarotra faritana amin'ny teny fohy. Ny tantara, ny saranga, ny politika, ny fivavahana ary ny literatiora dia maneho ny sary isankarazan'io firenena io, izay mahatezitra mandrakariva ny olona noho ny fiezahana hanatsotsotra ny zava-misy.
Tahàka ny marina izany, araka izany, ny misintona aingam-panahy avy amin'ireo tenin'ilay mpanoratra mamy hoditra hanazavana ny fahiny, ny ankehitriny, na izay mety ho momba an'i Iran, fara-faharatsiny ho ahy : Amim-pahatsorana lehibe sy fikatsahana ny fahaiza-miaina fotsiny no iresahantsika ny momba an'i Iran tokana. Raha ny marina ankoatry ny fisiana ara-jeografia, tsy misy akory angamba ilay Iran izay eritreretintsika fa hitantsika.